एक शब्दले लगानीकर्ताको १३ अर्ब डलर स्वाहा, विश्वभरको बजारमा तीव्र उथलपुथल ! Bizshala -
एक शब्दले लगानीकर्ताको १३ अर्ब डलर स्वाहा, विश्वभरको बजारमा तीव्र उथलपुथल !
काठमाण्डौ । चीनसँग जारी व्यापार वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दुईवटा ट्वीट विश्वको सेयर बजारका लागि निकै महंगो साबित भयो ।
उनको ट्वीटबाट लाखौं वा करोडौ मात्र डूबेन, विश्वभरको सेयर बजारमा उतारचढावको नयाँ सिलसिला सुरु भएको छ ।
ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टका अनुसार ट्रम्पको ट्वीटमा प्रयोग भएको प्रति शब्दले ग्लोबल स्टक मार्केट(विश्व सेयरबजार)लाई १३ अर्ब डलरको नोक्सानी गर्यो ।
गत सातासम्म अमेरिका र व्यापार सम्बन्धसँग जोडिएको जोखिममा लगानीकर्ताहरुको खासै ध्यान गएको थिएन । यो हप्ताको सुरुवातमा समेत व्यापार वार्ता सफल हुनेमा लगानीकर्ताहरु ढुक्क झै देखिन्थे ।
ठूला केन्द्रीय बैंकहरुको व्यवहार नरम बनिसकेको थियो भने अमेरिकी कम्पनीहरुको आम्दानी समेत अनुमानभन्दा राम्रो भइरहेको थियो ।
सिड्नीका एक बजार रणनीतिकार एलिएनर क्रेगले भनेका छन् कि अमेरिका र चीनबीच हालै बढेको टकरावका कारण अनिश्चितताको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ, किनभने यी दुई महाशक्तिबीच कुरा मिल्नेमा बजार र लगानीकर्ता ढुक्क देखिन्थे । यो साताको अन्तसम्ममा अवस्थामा चमात्कारिक परिवर्तन आुने छाँटकाँट समेत अब न्यून बनेको छ । यसले लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा निकै क्रूर प्रहार गरेको उनले बताएका छन् ।
१०२ शब्दले हल्लियो विश्वबजार
डोनाल्ड ट्रम्पले दुईपटक गरी १०२ शब्दको ट्वीट गरेका थिए, जसले विश्वको सेयर बजारमा उथलपुथल मच्चाइदियो । एक हिसाबले भन्दा लगानीकर्ताहरुमा महाभूकम्प ल्याइदियो ।
वार्ताको आधारमा हेर्ने हो भने बितेको दुई दिनमा विकास भएका घटनाक्रम यो वर्ष बजारलाई ठूलै झड्का दिन काफी साबित भए । यस्तो अवस्थामा कतिपय देशमा जारी बुल मार्केट निरन्तर नहुने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरुले भने व्यापार वार्ता ढिलो चाँडो सफल हुने भन्दै लगानीकर्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, लगानीकर्ता यस्तो आग्रहको पछि दगुर्ने अवस्थामा छन् भन्ने बजारले देखाउँदैन ।
दुई महाशक्तिबीचको जारी वार्ता असफल भएसँगै कतिपय लगानीकर्ता भने प्रफिट बुक गरेर धमाधम बजारबाट बाहिरिरहेका छन् । बजारहरुमा देखिएको उच्च बिक्री चापले समेत लगानीकर्ताले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरिरहेका प्रष्ट देखिइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
ओआण्डा एशिया प्यासिफिकका सिनियर मार्केट एनलिस्ट जेफ्री हैलेले भनेका छन्–‘मलाई लाग्छ लगानीकर्ताहरु सतर्क भई आफ्नो पोर्टफोलियोलाई सीमित गरिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार वासिङ्टनमा बिहीबार र शुक्रबार अमेरिका र चीनबीच हुन लागेको बैठकले धेरै कुरा निर्भर गरिदिनेछ ।
काठमाण्डौ । बेलायतले चीन–अमेरिका व्यापार विवादका बिषयमा चासो...
यी हुन् सबैभन्दा धेरै सुन भण्डार गर्ने देश, कुन देशमा कति ?
काठमाण्डौ । बहुमूल पहेँलो धातु सुन कठिन समयमा काम आउँछ । यदि हामीलाई...
लस एन्जलस(रासस/एएफपी) – हेली वाल्टर्सलाई कानून विषयमा डिग्री हासिल...
केराको फाइबरबाट स्यानेटरी नेप्किन
काठमाण्डौ । आईआईटी दिल्लीको संरक्षणमा सुरु भएको एउटा स्टार्ट–अप...
अमेरिकाको प्रतिबन्धप्रति हुवावेको आपत्ति
काठमाण्डौ । चीनको प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी हुवावेलाई...
सन् २०२१ मा अमेरिकामा ठूलो आर्थिक मन्दी आउने !
वासिङ्टन।संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध...
स्यान्डविच ल्याउन ढिला गर्दा वेटरको गोली हानी हत्या
काठमाण्डौ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित एउटा रेस्टुराँमा...
जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर, विश्वमै पहिलोपटक आइसल्यान्डको
काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनको असरले आइसल्यान्डको ७०० सय वर्ष...